Taom-baovao malagasy iraisana: Hankalazaina voalohany eto vakinankaratra
mardi, 19 septembre 2017 11:06
Taorian’ireo fankalazana maro efa nisy dia hisy indray ny fankalazana ny « Taombaovao Malagasy Iraisaina », izay ho hankalazaina eto Antsirabe ny 20 ka hatramin’ny 24 septambra ho avy izao ka ho ankalazaina voalohany eto Vakinankaratra izany.
Nisy ny fananganana ny komitim-paritra hisahana ny fankalazana izany ka ho an’i Vakinankaratra dia Rtoa Angelina Ralaizafy no mitarika izany. Ny faha-22 septembra moa no tapaka fa hankalazana izany noho ny fitongilanan’ny tsinam-bolana amin’io andro io, izay manamarika ny fanombohan’ny lohataona eto Madagasikara.
Raha ny fanazavany ihany dia tsy manafoana ny fankalazana efa nisy sy fanaon’ireo efa nanao izany ity hetsika ity, satria nambaran’izy ireo fa ireny hetsika efa nisy ireny dia tsy hiraisan’ny Malagasy manerana ny Nosy satria ny any amin’ny faritra dia tsy mankalaza izany Alahamady be izany sy ireo hafa eto an-drenivohitra, ka ity no heverina fa hampiraisana izany tsikelikely.
Hetsika isan-karazany moa no entina mandritra ity hetsika ity, toy ny fifaninanana isan-karazany, ny fampisehoana vakodrazana sy hiragasy ary ny fifaninanana kabary, ka isan’ny hanombohana izany sy handraisana ireo Ampanjaka sy Olobe avy any amin’ny faritra ny andron’ny alarobia 20 septambra, izay any Betafo no hanombohana izany amin’io fotoana io.
Marihina fa ny andron’ny 22 septambra moa no tena ivon’ny fankalazana ity taom-baovao malagasy ity.
jeudi, 07 décembre 2017 21:42
mercredi, 06 décembre 2017 04:13
mercredi, 06 décembre 2017 02:12
dimanche, 03 décembre 2017 15:28
dimanche, 03 décembre 2017 00:29
samedi, 02 décembre 2017 01:32
vendredi, 01 décembre 2017 02:17
vendredi, 01 décembre 2017 01:07
jeudi, 30 novembre 2017 05:54